N'izu gara aga n'izu a, m bipụtara n'ihu magazin magazin bụ Economist si na 1988 na Facebook. Ọ na-egosi phenix nke na-ere onwe ya na ego akwụkwọ ọkụ. Gburugburu n'olu nke phoenix bụ a gold mkpụrụ ego ahụ anya na-eme nke ukwuu reminiscent nke kaadị ego bitcoin. Na mkpụrụ ego a anyị na-ahụ [...]
gbara akwụkwọ BITCOIN, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 9 December 2017	• 16 Comments
Mgbe onye ọ bụla a na-now-lekwasịrị anya bitcoin mee ngwa ngwa ego site kaadị ego, na kaadị-mama yiri n'ezie ka isi imebi ego usoro n'okpuru echiche na kaadị ego bụghị n'okpuru adịgide nke nnukwu mmiri na IMF . Ọ ga-abụ akwụkwọ ego nke amaghi aha [...]
gbara akwụkwọ BITCOIN, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 30 November 2017	• 17 Comments
Ntughari dị ka (karịsịa) bitcoin jiri ọtụtụ ọkụ eletrik! Nke a dị nnọọ ukwuu na ọ karịrị ike oriri nke mba dum. Ngwuputa Bitcoin na-eji ike karịa mba ndị dị ka Ireland na Nigeria. Na 28 November, ebe nrụọrụ weebụ Naturalnews.com biara na ike bitcoin dị ike ma e jiri ya tụnyere mba niile n'ụwa (lee ebe a). Na [...]
Mgbe ị na-ebu ụzọ banye n '' bitcoins ', ị na-abịa nyocha dị mfe dị ka m nyere n'isiokwu a. Nke ahụ nwere ike inye mmetụta dị mkpa banyere bitcoin ma ọ bụ cryptocurrency bụ, ma n'eziokwu nke ahụ bụ ihe dị nnọọ nfe dị nro nke eziokwu. Cryptocurrency bụ ihe na nwere ihe niile iji [...]
gbara akwụkwọ BITCOIN, OZI OZI	by Martin Vrijland	na 27 November 2017	• 8 Comments
N'ime afọ mbụ ya, ndị na-achọ ịṅụ ọgwụ ọjọọ ha na-ejighị bitcoin eme ihe site na mail n'ụlọ. Ndị malitere 7 afọ gara aga wee chefuo 10 euro nke bitcoints bụ ugbu a bụ ndị mbụ bitcoin millionaires. Ọ bụrụ na na 2010 ị na-akwụ 10 euro naanị [...]
Nleta ha: 2.612.795
Future op Donald Trump na-akpọ ụbọ akwara mgbe Rome na-agba ọkụ, dị ka Emperor Nero
SandinG op Donald Trump na-akpọ ụbọ akwara mgbe Rome na-agba ọkụ, dị ka Emperor Nero
Tụlee op Donald Trump na-akpọ ụbọ akwara mgbe Rome na-agba ọkụ, dị ka Emperor Nero